I-ActiveCampaign: Kutheni iTagging ibalulekile kwiBhlog yakho xa isiza kwi-RSS Email Integration | Martech Zone
Inqaku elinye endicinga ukuba lisetyenzisiwe kushishino lwe-imeyile kukusetyenziswa kwe-RSS feeds ukuvelisa umxholo ofanelekileyo wephulo lakho le-imeyile. Uninzi lwamaqonga anenqaku le-RSS apho kulula kakhulu ukongeza ukondla kwincwadana yakho ye-imeyile okanye elinye iphulo olithumelayo. Into ongenakuyiqonda, nangona kunjalo, kukuba kulula kakhulu ukubeka umxholo othile, umxholo, kwii-imeyile zakho endaweni yokutya kwebhlog yakho yonke.
Nanku umzekelo. Ndisebenza neRoyal Spa ngoku, umenzi wengingqi kunye nomfakeli we amatanki edadayo. Iitanki zokudada zizixhobo zokuncitshiswa kwemvakalelo ezinetoni yezibonelelo zempilo. Inkampani isebenzisa i-imeyile ngesiseko esilinganiselweyo ukuze ihlale ingadibanisi abathengi bayo. Ngenxa yokuba baneemveliso ezijolise kubaphulaphuli abahlukeneyo, basebenzisa uluhlu ngokufanelekileyo ukuhambisa ngokufanelekileyo abaphulaphuli babo. Kudos kwiarhente yabo, Ripples ezinzulu, yokusekwa kweziseko zobu buchule.
Bendi thethana noAron kwiiRipples ezinzulu ukonyusa amaxabiso okuphendula kwii-imeyile zabathengi bakhe. Ithuba lokuqala endilibonileyo kukuba inkampani ihlala ithumela nje i-imeyile emfutshane kakhulu engenalo uyilo lokuzibandakanya, olusebenzisa imithombo yeendaba ngokufanelekileyo, kwaye ingazichazanga ngokupheleleyo zonke izinto kunye nezibonelelo zeemveliso zazo. Ndicinga ukuba le yimpazamo abathengisi abaninzi be-imeyile abayenzayo kule mihla.
Abathengisi bahlala bekholelwa ukuba ababhalisi bahamba ngokukhawuleza kwibhokisi yabo engenayo ukuze a elifutshane i-imeyile ibhetele… ayiyonyani. Ndingaphikisa ukuba kufuneka ubambe ingqalelo yabo… kodwa xa bevula i-imeyile, baya kuthatha ixesha ukuskrolela ngaphakathi kwaye baskene i-imeyile, emva koko bajonge kwiindawo abanomdla kuzo. Thatha ithuba lomrhumo wakho ukuvula i-imeyile kwaye wenze i-imeyile ende, ekroliweyo eyilelwe kakuhle, yahlulahlulwe yangamacandelo aphambili, inemifanekiso emihle exhasa, kunye neefowuni ezomeleleyo zokwenza isenzo.
Ngoyilo olutsha, ndadibanisa amacandelo aliqela-umgca wokuluka, umxholo wentloko eyomeleleyo, intshayelelo / isishwankathelo se-imeyile, amanqaku ebhulethi, igridi yemveliso eneenkcazo, amaqhosha okufowuna nokwenza isenzo, iividiyo zikaYouTube ezichaza umahluko wazo… emva koko amanqaku akutshanje malunga amatanki edadayo kwibhlog yabo. Ngaphakathi kwenyawo, ndongeze iiprofayili zabo zentlalo ukuze amathemba abalandele kodwa bebengakulungelanga ukuthatha inyathelo kwangoko namhlanje.
Imeyile yokuDityaniswa kwe-RSS nge-Tag feed
Endaweni yokuba ndakhe icandelo lesiko kwi-imeyile yabo edwelise iiposti zebhlog zamvanje, ezifanelekileyo, ndiye ndaqinisekisa ukuba zonke iiposti zebhlog ababezipapashe zaziphawulwe ngokufanelekileyo xa babhala ngonyango lokuhamba kunye neetanki zokudada. Into ongenakuyiqonda malunga neWordPress kukuba ungatsala udidi okanye feed-ekhethekileyo ye-RSS feed ukusuka kwiwebhusayithi. Kule meko, ndiyenzile ngokutsala amanqaku abo awayephawuliwe ngoku edadayo. Ngelixa kungabhaliswanga ikakhulu, nantsi idilesi yokondla yethegi:
Ungabona ukwahlulwa kwe-URL yokondla tag:
I-URL yebhlog: Kule meko https://www.royalspa.com/blog/
tag: Yongeza tag kwindlela yakho ye-URL.
Igama lethegi: Faka igama lakho lethegi. Ukuba ithegi yakho ingaphezulu kwegama elinye, ichanekile. Kule meko, kunjalo edadayo.
Ukondla: Yongeza ukondla ukuphela kwe-URL yakho kwaye uya kufumana isondlo esifanelekileyo se-RSS kwithegi ethile!
Imeyile yokuDityaniswa kwe-RSS ngokweNdidi yokuTya
Oku kunokwenzeka ngodidi. Nanku umzekelo:
Uyakubona ukwahlulwahlulwa kwecandelo lokondla i-URL (le ingentla ayisebenzi… ndiyibhale nje njengomzekelo):
I-URL yendawo: Kule meko i-https: //www.royalspa.com/
Udidi: Ukuba uyagcina udidi Kwisakhiwo se-permalink, gcina apha.
Igama lodidi: Faka igama lethegi yodidi lwakho. Ukuba icandelo lakho lingaphezulu kwegama elinye, lithembekile. Kule meko, iitanki zokudada.
Igama lecandelo: Ukuba indawo yakho inamacandelwana, ungazongeza ezo zisendleleni.
Ukondla: Yongeza ukondla ukuphela kwe-URL yakho kwaye uza kufumana isondlo esifanelekileyo se-RSS sodidi oluthile!
Xa ifakwe kwi ActiveCampaignInto yomhleli we-imeyile yokutya kwe-RSS, amanqaku akutshanje ahlala ngamandla:
kunye ActiveCampaignUmhleli, ungalawula imida, ukugoba, isicatshulwa, imibala, njl. ngelishwa, abazisi mifanekiso kwisithuba ngasinye esinokuba luphuculo olukhulu.
Kubalulekile kule nto kukuqinisekisa ukuba zonke iiposti zihlelwe ngokufanelekileyo kwaye zimakiwe. Uninzi lweenkampani endijongisisa kuzo iisayithi zihlala zishiya olu luhlu lubalulekileyo kunye nedatha engachazwanga, eya kukukhathaza kamva ukuba unqwenela ukudibanisa umxholo wakho nezinye izixhobo ngeRSS feed.
Ngaba i-imeyile entsha iyile njani?
Sisalinde iziphumo zomkhankaso, kodwa siqale kakuhle kakhulu. Iirhafu zethu ezivulekileyo kunye namaxabiso okucofa sele ekhokelela kwimikhankaso emidala kwaye sineyure okanye kunjalo kwi-imeyile entsha! Ndongeze iintshukumo kuye nabani na obukele iividiyo ukuze sizithumele kwiqela lokuthengisa.
Ukubhengezwa: Ndililungu le ActiveCampaign kwaye ndisebenzisa eli khonkco kulo lonke eli nqaku.
tags: ActiveCampaignblogfeed yebhlogkublogaifidi yodidiudidi rss feedifidifeed kwi-imeyilefeed urlrss feedrss kwi-imeyileukutya kwethegiukutya rss feedWordPressukutya kwegama lokushicilela